On1.click | ခရော့တော့
... ော့တော့ သည် ကိုယ်အထက်ပိုင်းဝတ် သို့ အပေါ်ဝတ်တမျိုးဖြစ်ပြီး ဗိုက်သားတခု...
အဖြူရောင် အနားတွန့်ခရော့တော့ကို ဝတ်ဆင်ထားသော အမျိုးသမီး
ခရော့တော့ (ရှပ်တပိုင်းပြတ်၊ ဗိုက်သားဖော်ရှပ်၊ ရှပ်အောက်ပိုင်းဖြတ် ဟူ၍လည်း ခေါ်) (အင်္ဂလိပ်: Crop-top ) သည် ကိုယ်အထက်ပိုင်းဝတ် သို့ အပေါ်ဝတ်တမျိုးဖြစ်ပြီး ဗိုက်သားတခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ချက်နှင့်ခါးအထက်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ ဖော်ထားသည်။
၁၈၉၃ ချီကာဂိုကမ္ဘာ့ပြပွဲကြီးတွင် အီဂျစ်သားတို့၏ပြကွက်မှာ အတော်ပင် လူစိတ်ဝင်စားမှုရကာ ဗိုက်သားဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတွေးအခေါ်များ ပြောင်းလဲလာသည်။  ၁၉၃၀-၄၀ ကာလများတွင် ဖက်ရှင်လောကတွင် ဤအဝတ်အစားများ အတော်လွှမ်းမိုးသော်လည်း ရေကူးဝတ်စုံအမျိုးအစားအောက်တွင်ပင် ထားကြသည်။  ၁၉၆၀-၇၀ ကာလများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေး ဖြစ်လာပြီးနောက် ဘာဘရာဧဒင်နှင့် ဂျိန်းဘာကင်တို့သို့ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်များက လမ်းစထွင် ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။  အသွင်ကွဲများ၊ ရင်ဘတ်စည်းရှပ်သို့ ရင်ဘတ်ထုံးရှပ်များကို ၁၉၄၀ ဝန်းကျင် ဖက်ရှင်အဖြစ် မြင်ရသည်မှာ ၁၉၆၀ ကာလများအထိ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၀ နှစ်များတွင် ဖလက်ရှဒန့်ရုပ်ရှင် လူကြိုက်များသည်နှင့်အတူ ကိုယ်ကာလလေ့ကျင့်ရာတွင် ဝတ်လေ့ဝတ်ထရှိသော အင်္ကျီအဖြစ် တွေ့ရသည်။ ၁၉၈၃ ထွက် "လပ်ကီးစတား" အမည်ရှိ တေးဗီဒီယိုတွင် မက်ဒေါနားက ခရော့တော့ဝတ်ကာ သရုပ်ဆောင်သဖြင့် လူပြောသူပြောများခဲ့၏။  ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်တွင် တပြန်ခေတ်စားသည်မှာ ယနေ့အထိပင်တည်း။ 
↑ "Fashion Archives: A Look at the History of the Crop Top". Startup Fashion.7November 2015.
↑ "We highlight the key moments for 1940s fashion". Marie Claire. 29 March 2017.
↑ "White shirt campaign". Cash & Rocket.7April 2016. Archived from the original on7October 2017. Retrieved7October 2017.
↑ Emily Shire (15 June 2015). "Do You Dare to Bare inaCrop Top?". The Daily Beast.
↑ Candice Shih (7 January 2010). "Crop tops are back?". The Orange County Register. Retrieved 10 March 2019.